သံစဉ်မဲ့ အလင်္ကာများ: တံခါးချပ်
ကြိုးတန်းပေါ်မှာ တည်ငြိမ်စွာ လမ်းလျှောက်နေတတ်ပြီဆိုမှ
မင်း ဘယ်က ရောက်လာလို့
ဟူပါ (Edward Hopper) ရဲ့ ပန်းချီကားထဲ
စာရေးသူ--> တပြည်သူ အိမ့်ချမ်းမြေ့ (စာတင်ချိန်) 9:18 PM
ဒီ comment က ကိုယ့် အမြင်လေးပါ။ မလေး ဘလော့ကို လာလည်မိတော့ တွေ့လို့ ရေးလိုက်တာ။ ဘုရားစူး ပါရစေရဲ့.. ဘလော့ဆိုတာ အခုမှ သေသေချာချာ ဖတ်ဖူးတာ.
Edward Hopper ကိုတွေ့လိုက်လို့ အံသြသွားတယ်။ Edward Hopper ရဲ့ အဆောက်အဦးနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ ပန်ချီးကားတွေထဲက မလေးက ဒီကားကို ရွေးကြိုက်တာ မအံသြတော့ဘူး။ ဒါပေ့မယ် ကိုယ်တို့ မြန်မာ ပရိတ်သတ်ကို ဒီလိုပုံစံလေး မိတ်ဆက်ပေးတာ လိမ္မာတဲ့ တင်ပြမှုလေးပေါ့။ မလေးရဲ့ စာတွေမှာ ကိုယ်တို့မသိတဲ့ အနောက်တိုင်း ယဉ်ကျေးမှုတွေ၊ တွေးခေါ်သုံးသတ်မှုလေးတွေပါတော့ ကိုယ်တို့မြန်မာတွေ အနေနဲ့ မျက်စိပွင့် နားပွင့် လေ့လာရတာပေါ့။ ဖြစ်နိုင်ရင် အခြား ပန်ချီဆရာ၊ ဆရာမ အကြောင်းလေးတွေနဲ့ အခြားနိုင်ငံ က ယဉ်ကျေး မှုပုံစံတွေ ကို မြန်မာ့ ယဉ်ကျေးမှု ရှု့ထောင့် အမြင်ကနေ တင်ပြပေးပါအုံးလို့. ဘလော့ ရဲ့ ခန်နားမှုကို စာရေးဆရာမရဲ့ မြင့်မြတ်တဲ့ တွေးခေါ်ပုံက ထိန်းကွတ်ထားသလိုပေါ့
ကော်မန့်ပေးသူရဲ့အမည်လေးတွေကို ဆိုဒ်ဘားမှာ မြင်နေချင်လို့ရယ်၊ ကျမ ကော့မင့်တွေပြန်ရင် ဆိုဒ်ဘားမှာ ကိုယ့်နာမယ်တက်တက်လာမှာစိုးလို့ရယ် ကော်မန့်ကို ပြန်လေ့မရှိသော်လဲ ကိုလွမ်းလူက ဘလော့လောကထဲကို ၀င်လာသူ လူသစ်မို့ စာပြန်တာပါ။ Realist ဖြစ်တဲ့ Edward Hopper ရဲ့ပန်းချီတွေကို ကြိုက်တာက သူက အလင်းနဲ့အမှောင်ကို သိပ်ပိုင်နိုင်ပါတယ်။ အ၀ါအနုအရင့်နဲ့ အသားရောင်ရွေးချယ်တာ သိပ်ကျွမ်းကျင်သူပါ။ ဒီပန်းချီမှာဆိုရင်လဲ လေလှိုင်းသံ၊ ငှက်သံ၊ ရေသံတွေကိုတောင် ကြားနေရသလိုပါပဲ၊ ဒါကြောင့် သူ့ပန်းချီတွေထဲက ကျွန်မအကြိုက်ဆုံးပန်းချီလို့ ပြောလို့ရပါတယ်။
အိ အဲဒီကဗျာလေးကို အရမ်းကြိုက်တာပဲ ..
အထပ်ထပ် ..ဖတ်လို့ မရိုးဘူး ..
စကားလုံးတစ်လုံးချင်းစီမှာ သိမ်မွေ့တဲ့အဓိပ္ပါယ်နဲ့ကဗျာတစ်ခုလုံးကို သီသွားတာ ... လှတယ် ..
ပန်းချီကားနဲ့ တွဲထားတာ ပိုပြီး ထိရောက်တယ် ..
blogspot ကို အရင်တုန်းက သိပ်မ၀င်ဖြစ်ဘူး ..multiply's fan ဆိုတော့ .. တစ်ခါတစ်လေ သူများလင့်ခ်လုပ်လို့ဝင်ဖတ်ဖြစ်တာလောက်ပဲရှိတယ် ..
ခု တော့ မအိမ့် ရဲ့ သံစဉ်မဲ့ အင်္လကာနဲ့ ဒီဝိုင်းရဲ့ blog နှစ်ခုက အိရဲ့ fav ပဲ..
မအိမ့်နဲ့ လည်း တစ်နေ့နေ့ အကျိုးအကြောင်းတိုက်ဆိုင်ယင် ခင်ချင်ပါတယ် .. =)
မလေးရေ.. ဒါလေးကြိုက်တယ် ။ အရမ်းပဲ ။